ezomnotho welayisi nezinqubomgomo zezolimo eNigeria ukuthi kubaluleke kangakanani irayisi
ngokuqhubeka kwesikhathi eNigeria, le,ukusetshenziswa kwe-pa · tsurpas amashumi ambalwa eminyaka, Inghas ca irayisi sava inyukile ekudleni iba yinkcitho ngokushesha ukwedlula ukukhiqizwa..kuhamba kulo lonke leli , umphumela wokudla okuyisisekelo lokhu ukuthembela okwandayo kokuthengiswayo. Ngu 2014, cishe ingxenye yengxenye yelayisi edliwe eNigeria ingeniswa. Njengezwe elinabantu abaningi kakhulu e-Afrika eseningizimu yeSahara (IN), INigeria isheshe yaba ngumngenisi ohola phambili welayisi ezwenikazi futhi, muva nje, emhlabeni.Lokhu ukuthembela okukhulayo kokungeniswa kwelayisi kukhathaza kakhulu uhulumeni waseNigeria, futhi kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-1980 kwenziwa izinhlelo eziningi zokukhuthaza ukukhiqizwa kwelayisi kwasekhaya futhi kufezekiswa ngokwanele kwelayisi(noma okungenani ukunciphisa ukukhula kokungeniswa ngaphakathi ezweni).
Ngokuqondene, amasu amathathu abalulekile asanda kwamukelwa uhulumeni ayahlolwa kabanzi maqondana nemithelela yawo engaba khona yesikhathi esizayo yokuguqula umnotho welayisi nokwenza imikhiqizo yasekhaya incintisane nokungeniswa ezweni:
1. Kwethula ukungenelela komkhakha womphakathi ukukhuthaza ukukhiqizwa kwe-paddy ngokusatshalaliswa kanye nokwamukelwa kwembewu engcono nokunye ukufakwa kwesimanje.
2. Ukwenza ngcono ukucubungula kwasemuva kokuvunwa kanye nemikhakha yokugaya ukugqugquzela izinhlobo zerayisi ezisezingeni eliphakeme kakhulu nezisezingeni eliphakeme.
3. Kwethula amanani entela angenayo ukusiza ukuvikela umkhakha welayisi wasekhaya.
I-Rice Trade yaseNigeria ngomongo womhlaba
INigeria isiphenduke umngeneleli omkhulu kunabo bonke emhlabeni phakathi kweminyaka eyishumi eyedlule 1.1 imibukiso, Ukungeniswa kwelayisi lokungena kwelayisi okukhuphukile kusuka 7 amaphesenti eminyakeni yokuqala yekhulu lama-21 kuya 8.2 amaphesenti eminyakeni emihlanu yakamuva lapho imininingwane ikhona (2008-2012). Phakathi kwabangenisa irayisi abaphezulu, INigeria ilandelwa kakhulu yiPhilippines, I-Iran, Indonesia, kanye ne-European Union.Ukuthunyelwa kwenqwaba kwezinto ezisetshenziswa ezweni laseNigeria kuvela eThailand, IVietnam, kanye neNdiya,abahlanganyela ngokuhlanganyela 60 amaphesenti abo elayisi athengiswa ezimakethe zomhlaba wonke.
Ukuthembela ezimakethe zerayisi zomhlaba kuphakamisa ukukhathazeka okukhulu kwenqubomgomo maqondana nokuqinisekisa ukuphepha kokudla kanye nokugcina imali esezingeni elifanele yezindawo zokuhwebelana zangaphandle zezwe. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi lapho sibhekene nokunyuka okumangazayo kwamanani, njengoba kwenzeka ngesikhathi sakamuva 2008 inkinga yokudla. Ilayisi ikakhulukazi, amanani akhuphuka cishe 255 amaphesenti phakathi 2007 nango-2008, ephakeme kakhulu kunasenkingeni yokugcina yokudla 1974, lapho banda ngo 200 amaphesenti (UHeadey noFan 2008).
Ukubaluleka Kwezolimo Nokunqunywa Kwezinqubomgomo Zamarayisi
Ingxoxo engenhla ikhombisa ukuthi ezolimo zidlala indima enkulu emnothweni waseNigeria. Indima yezolimo njengomthombo ophambili wemisebenzi, ukuphepha kokudla, futhi imali engenayo yasemakhaya idalwa ikakhulu ngenxa yokuma okuhle nokuhlukahluka komhlaba wezolimo eNigeria okuhlanganiswe yimifula emibili emikhulu ye-Afrika, iNiger neBenue (Umdwebo 1.1). Imithombo yamanzi ahlanzekile yande kakhulu eNigeria ngenxa yalemifula emibili emikhulu neminye imizimba emikhulu yamanzi. Amachibi amakhulu asolwandle asebenza njengezansi zemifula kule mifula emibili, endaweni okubhekiselwa kuyo njenge
amafashama, ezifanele ikakhulukazi ukukhiqizwa kwelayisi. Ngezikhathi ezithile, nokho, ukufinyelela kwamanzi kungathinteka ngenxa yesomiso kanye / noma izikhukhula (Kuku-Shittu et al. 2013).
Xhumana Nathi Ngomnotho welayisi nezinqubomgomo eNigeria